Biomass Pellet Mashini
Fudza Pellet Machinery
Pellet kurongedza muchina
Double Shaft chisanganiso
Pulse Guruva Kubvisa
Runhare: +86 13953111589
Kero: Kwete 666 Fengnian Road, Jinan City, Shandong Province, China
Kingoro Boka: Iyo Shanduko Mugwagwa Wechinyakare Kugadzira （chikamu 1）
ne admin pane 21-04-06
Musi waFebruary 19, musangano wekukurudzira weJinan City wekumhanyisa kuvaka kwenguva nyowani yemazuvano uye yakasimba dunhu guru rakaitwa, iro rakafemera Mutero wekuvakwa kweguta rakasimba reJinan. Jinan achatarisa kuedza kwayo pasainzi uye tekinoroji yevaeni ...
Basa rinofadza uye hupenyu hune hutano kune vese vashandi veShandong Kingoro
ne admin pane 21-04-01
Kuona hutano hwepanyama uye hwepfungwa hwevashandi uye kugadzira chikuva chekushanda chakakosha chinhu chakakosha chebasa rebazi reboka reboka, boka reCommunist Youth League, uye Kingoro Trade Union. Muna 2021, basa rePati neVashandi Boka rinotarisana navo ...
Political Research Hofisi yeJinan Municipal Party Committee yakashanyira Kingoro Machinery kuti iongororwe
Musi waKurume 21, Ju Hao, mutevedzeri wemutungamiriri wePolice Research Hofisi yeJinan Municipal Party Committee, nevamwe vake vakapinda muJubangyuan Boka kuti vaongorore mamiriro ekusimudzira emabhizimusi akazvimirira, vachiperekedzwa nema comrade makuru eDare reKomiti Yezvematongerwo enyika .. .
PaZuva reVanhu Kodzero dzeVatengi, Shandong kingoro pellet muchina wakavimbisa mhando uye yakatengwa nechivimbo
Kurume 15 izuva repasi rose rekodzero dzevatengi, Shandong kingoro gara uchitenda kuti zvinongotevedzera hunhu, Ndiko kudzivirirwa chaiko kwekodzero uye zvido zvevatengi Hunhu hwekushandisa, hupenyu huri nani Nekusimudzira hupfumi, mhando dzemachira emaperembudzi ari kuwedzera uye zvimwe ...
"Mami anonakidza, Mukadzi Anodakadza" Shandong Kingoro anoshuvira shamwari dzese dzechikadzi Zuva reVakadzi Vanofara
Panguva yechiitiko cheZuva reVakadzi regore negore, Shandong Kingoro inotsigira tsika yakanaka ye "kuchengeta nekuremekedza vashandi vechikadzi", uye inounganidza Mutambo we "Vanonakidza varume, Mukadzi Anodakadza". Secretary Shan Yanyan uye Director Gong Wenhui we ...
Shandong Kingoro 2021 Kushambadzira musangano wekuparura musangano wakavhurwa zviri pamutemo
Musi waFebruary 22 （husiku hwaNdira 11, gore reChinese remwedzi）, Shandong kingoro 2021 Kushambadzira musangano wekutangisa nemusoro wenyaya we "ruoko muruoko, fambira mberi pamwe" wakaitwa zvine mutsindo. Mr. Jing Fengguo, Sachigaro weShandong Jubangyuan Group, Mr. Sun Ningbo, General Manager, Ms. L ...
Argentina Biomass Pellet Mutsetse Dhirivhari
Svondo rapfuura, isu takapedza iyo biomass pellet yekugadzira mutsara kuendesa kuArgentina mutengi. Tinoda kugovera mamwe mafoto. Kuti utizive isu zvirinani. Ndeupi achazove wako akanyanya bhizinesi shamwari
Kuburitswa kwegore rega kwemakumi mashanu emakumi matani matanda emapellet ekugadzira mutsara kuendesa ku Africa
ne admin pane 20-10-29
Munguva pfupi yapfuura, isu tapedza kuburitsa pagore kwemakumi mashanu emakumi mashanu ematani matanda emapellet ekugadzira mutsara kuendesa kune vatengi vemuAfrica. Zvinhu zvacho zvichaendeswa kubva kuQingdao Port kuenda kuMombasa. Midziyo 11 zvachose inosanganisira 2 * 40FR, 1 * 40OT uye 8 * 40HQ
Kuendesa kwechishanu kuThailand muna 2020
ne admin pane 20-09-02
Iyo mbishi yezvinhu hopper uye yakasara chikamu cheiyo pellet yekugadzira mutsara yakatumirwa kuThailand. Kuchengeta uye kurongedza Kuendesa maitiro
ne admin pane 20-08-20
Vacuum dryer inoshandiswa kuomesa huni uye inokodzera diki inokwana pellet factoty.
Guta remubatanidzwa wemasangano evashandi anoshanyira Kingoro uye anounza nerupo Zhizha Tsitsi Zvipo
Musi waChikunguru 29, Gao Chengyu, munyori webato uye mutevedzeri mutevedzeri wasachigaro weZhangqiu City Federation of Trade Unions, Liu Renkui, mutevedzeri wemunyori uye mutevedzeri wasachigaro weCity Federation of Trade Unions, naChen Bin, mutevedzeri wasachigaro weCity Federation of Trade Mibatanidzwa, yakashanyira Shandong Kingoro ku bri ...
ne admin pane 20-08-06
Ⅰ. Kushanda Nheyo & Chigadzirwa Kubatsira Iyo giya bhokisi inoenderana-axis yakawanda-nhanho helical giya rakaomarara mhando. Iyo mota ine yakatwasuka dhizaini, uye iko kubatana kuri plug-mune yakanangana mhando. Panguva yekushanda, izvo zvinhu zvinowira zvichidzika kubva pachipinda kupinda pamusoro pasherufu inotenderera, ...
Kingoro Boka: Iyo Shanduko Mugwagwa we ...
Basa rinofadza uye hupenyu hune hutano kune vese vanoshandisa ...
Vachikuya muchina wehuni, Nyundo Mill NeDutu, Bhandi rinotyairwa Hammer Mill, Mhuka Dyisa Pellet Mill, Bindu Wood Chippers, Wood Crusher,